Oluyisicaba: izinzuzo ukusetshenziswa
ezinophahla oluyisicaba Bebelokhu baziwa ukusebenzisa kwaba ngaphezulu namakhulu eminyaka 18-19. Sine-ke lisetshenziswe multi-storey izakhiwo. Ngokuvamile, le ndawo akusetshenziswa kwezinye izindawo, wenza kuphela ebaluleke kakhulu umsebenzi - nesembozo futhi ivikela isakhiwo emathonyeni ngaphandle.
Mayelana ekuqaleni ukuthuthukiswa emakethe umnotho ezweni lakithi, kungenzeka ukuthi kophahla oluyisicaba isakhiwo izosetshenziswa ngendlela ehluzekile. Phela, kuwo, kuye endaweni, ungafaka i-swimming pool, ahlukahlukene oluhlaza izindawo, solarium, ezemidlalo endaweni nokunye okuningi.
Into esemqoka - ukwazi inhloso yokuqala okuyiwona Ngifuna ukusebenzisa kule ndawo, + ukuze kuthi lapho ukuklama ukubala umthwalo esisekelweni, izindonga, ukuze kakhulu uphahla. Mhlawumbe hhayi kuphela e -movie American oluyisicaba elizoba indawo lokufikela ezinophephela emhlane, kodwa futhi ezisemadolobheni isiminyaminya kanye nokuntuleka izindawo zokupaka izimoto bazokwazi ukupaka izimoto zabo phezu kophahla. Futhi kungani kungenjalo?
Kungaba kuphela eziqhutshwa lapho kukhethwe kahle ummango (ukuze buthelela iqhwa, imvula, nokunye). Into esemqoka - ilungelo flat ukufakwa ophahleni, hhayi ukulimaza sonke isakhiwo sisonke!
Ngenxa yokuthi i-ungqimba eyayibaluleke echayeke emisebeni yelanga, kubalulekile abaphila izinto amelana UV ukukhanya. Uma ufaka ukufulela esiku ophahleni oluyisicaba lwezindlu okufanayo eliphezulu liphumele izakhiwo qala ukushisa-ekuvikeleni ungqimba, futhi phezu - ungangenisi amanzi. Futhi uphahla ukuthi bazoya eziqhutshwa (uhambo kungase izingadi isitshalo), kunalokho, ukwahlukanisa ukushisa phezu ungqimba ungangenisi amanzi ukuze ifakwe.
Indaba kumelwe sithathe amanzi iyavuleka. Okuwukuphela kwendlela ukunweba ukuphila isikhathi eside ukuqina phahla iziphi izici zangaphandle. Esikhathini ungangenisi amanzi kanye ekuvikeleni ungqimba iyadingeka ukuze ungqimba umusi isithiyo Kunconywa. Uma kungenjalo, by ukufingqa ungqimba ungangenisi amanzi kungadala isikhunta, isikhunta ukuthi ngokuqinisekile kuholele yokuthi kophahla oluyisicaba echayeke ukuguguleka kwenhlabathi.
It kuvela a "ungqimba ikhekhe" ezinjalo:
1) Uma uyikha phezulu le amapuleti kuyendlulela kumele kube eyehlelayo ukuze amanzi agelezé ohlangothini predetermined ukuba gidrostokam, Chutes, emathileyi.
2) Khama ungqimba okungase kancane ungamunca umswakama, kodwa umoya saziso ngakho abangele iphunga ezingemnandi.
3) screed oyifunayo oncibilikisiwe ungqimba rubberized.
4) ungangenisi amanzi oluyisicaba. Izimfuneko main kuso: ikhono athwale imithwalo mechanical okushisa iconsi, futhi kanjalo kokucindezelwa nokuzabalazela eqine, kanye ukucindezeleka ngokomzimba, ngoba lokhu uzobe ophahleni esizakala ngawo.
5) Ukuvutha-nangokuvikela ungqimba.
Yiqiniso, ungqimba ezibaluleke kakhulu - gidroizolyatsinny. Kuze kube manje, izinto best ukuze ungangenisi amanzi yilezi ezilandelayo: polystyrene extruded namabhodlela foamed noma ukwahlukanisa ketshezi.
Ngempela idinga i-akhawunti evumelekile lapho ukuklama kufanele bacabangele externalities negative, ngaphandle kwalokho konke lizoshona abakhwabanisi.
Kungani mgodi ihlanganisa round - ke kuyimfuneko noma isiko?
Indlela yokusebenzisa beacons qondanisa izindonga
Indlela yokwenza kompheme ngezandla zakhe, ukuze omakhelwane nomona
Ukhonkolo Okuprintiwe. Izici, zamanani, ukubuyekezwa
Baguley - abakhwelwe idla ingane eshaweni
Indaba kanye nabalingisi we ifilimu "Babe"
VAT zokukhokha. Kuphothulwe zokudalula VAT
Emahhotela aphambili e-Venice: kafushane